ကြုံခဲ့မိတာ​လေး | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » ကြုံခဲ့မိတာ​လေး
Posted by လုံမလေးမွန်မွန် on Dec 16, 2014 in Creative Writing, Think Different | 11 comments
ဒီ​နေ့ လှည်းတန်းက​နေ သမိုင်းမြို့သစ်​ကို သွားတယ်​.. ပြည်​လမ်းက​နေ အင်းစိန်​လမ်းကို သုခကမ္ဘာ​ဆေးရုံလမ်းက​နေ ဝင်တယ်​​ပေါ့.. ကိုယ်​အလျင်​လို​နေမှန်းသိ​တော့ ကားသမားက အရှိန်​​လေးနဲ့​တော့ ​မောင်း​ပေးပါတယ်​.. ဒါ​ပေမယ့်​ အရမ်းကြီး​တော့ မမြန်​ဘူး.. ပုံမှန်​ထက်​ နည်းနည်း​လေးပဲ ပိုတာ.. အင်းစိန်​လမ်းမ​ပေါ် တက်​ကာနီးကျ​တော့ ​လမ်းသွယ်​ထဲမှာ လူ​တွေရှိ​တော့ ဟွန်းတီးလိုက်​ပြီး ဆက်​​မောင်းတယ်​.. အဲဒီမှာ လူတစ်​​ယောက်​က စွတ်​မ​မောင်းနဲ့ဟ လို့ လှမ်း​အော်​သံ ကြားလိုက်​တယ်​.. လှမ်း​ပြောတာကို ကြားလိုက်​ရတယ်​ဆို​တော့ အရှိန်​က သိပ်​မပြင်းဘူး​ပေါ့.. ကားဆရာက ဘာမှ ပြန်​မ​ပြောဘူး.. ကိုယ်​​တွေ​တောင်​ အံ့သြသွားတယ်​.. ဘာလို့များ ပ
လမ်းသွယ်​က​နေ အင်းစိန်​လမ်းမ​ပေါ်ကို တက်​ဖို့ကျ​တော့ ကား​တွေပိတ်​​နေ​တော့ ခဏ​စောင့်​​နေရတယ်​.. အဲဒီမှာ ​စောနကလူက မီလာပါ​လေ​ရော.. ကားဆရာကို လာ​ဟောက်​တယ်​.. ​ဟေ့​ကောင်​.. ဖြည်းဖြည်း​မောင်းကွ.. လူလို​မောင်းကွ.. ဟွန်းတီးပြီး စွတ်​မ​မောင်းနဲ့ ဘာညာဆိုပြီး.. ကားဆရာကလည်း မင်းကို ထိခိုက်​သွားလို့လားဆိုပြီး ပြန်​​ပြော​တော့ က​တောက်​ကဆ ဖြစ်​ကြ​ရော.. ဟိုလူက မင်း​မေ…. ဆိုပြီး ဆဲတယ်​.. ကားဆရာက မင်းငါ့ကို မဆဲနဲ့ဆိုပြီး ပြန်​​ပြောတယ်​… ဟိုလူက သူ့သားဖြစ်​ပုံရတဲ့ က​လေးတစ်​​ယောက်​ကို လက်​ဆွဲလို့.. စိတ်​ထဲက​တောင်​ ​တွေးမိ​သေးတယ်​.. သားသမီး​ရှေ့မှာ အ​ဖေတစ်​​ယောက်​က လမ်း​ပေါ်က ကားသမားကို ရန်​လာစပြီး ပြဿနာရှာ.. ဆဲတာ​တွေကို က​လေးက သင်​ယူမိပြီး.. ဒီက​လေး ဘယ်​လိုများ ကြီးပြင်းလာပါလိမ့်​မလဲ လို့​ပေါ့…
​နောက်​​တော့ ကား​ချောင်​တာနဲ့ ဆက်​ဝင်​လာပြီး ဗဟိုလမ်း​မ​ပေါ်ကို သွားဖို့အတွက်​ ​ကွေ့​ကြောယူပြီး မီးပွိုင့်​​စောင့်​တယ်​.. အဲဒီမှာ ​စောနကလူ ​ရောက်​လာပြီး​တော့.. ​ဟေ့​ကောင်​..မင်းက ဘာ​ကောင်​လဲ.. ​စော​စောက ငါ့က​လေးရှိ​နေလို့.. မင်းအခု ဆင်းခဲ့စမ်း ဆိုပြီး ကားထဲက ကားဆရာကို အတင်းဝင်​ထိုး.. ကား​ပေါ်က ဆွဲချနဲ့.. လာ​သောင်းကျန်းပါ​လေ​ရော.. ကားဆရာက ​ရှောင်​တယ်​..မဆင်းဘူး.. မီးပွိုင့်​ကြီးမှာ​နော်​.. ​နောက်​ အဲ့လူက ကားတံခါးကို အတင်းဆွဲဖွင့်​ပြီး ဆွဲချ​တော့ ကားဆရာလည်း စိတ်​မထိန်း​တော့ဘဲ.. လာခဲလစမ်း ​ဟေ့​ကောင်​ဆိုပြီး ဆင်းထိုး​တော့တာ.. ကားဆရာက ခပ်​ဝဝ.. သူ့ထက်​ လူ​ကောင်​ကြီးတယ်​.. တကယ်​တမ်းကျ​တော့ ဟိုလူလည်း မခံနိုင်​ဘူး.. ထွက်​​ပြေးပါ​လေ​ရော.. ကားဆရာခမျာ.. သနားပါတယ်​.. ကိုယ်​​တွေက အကုန်​သိ​နေ​တော့.. စိတ်​​လျှော့ပါ ဦး​လေးရယ်​.. ဦး​လေး မှန်​ပါတယ်​.. စိတ်​​အေး​အေးထားပါ​နော်​.. ဘာညာဆိုပြီး ​ဖြေ​ပြော​ပြောမိတယ်​.. ဦး​လေးက အဲ့လူကို သိတယ်​.. ဒီရပ်​ကွက်​ကပဲ.. ပိုက်​ဆံရှိ.. ​နေရာရှိထဲကတဲ့..
ကိုယ်​​တွေက​တော့ ကားဆရာကို ပြဿနာရှာမှာကိုပဲ စိုးရိမ်​မိတာ..ငါကဘာ ဆိုပြီး လူ​ရှေ့သူ​ရှေ့. ပါဝါပြချင်​တဲ့ ဒီလိုလူမျိုး​တွေကလည်း ရှိ​သေးတယ်​.. တကယ်​တမ်းကျ​တော့လည်း သတ္တိမရှိလှပါဘူး…
အဲ့လို အဲ့လို.. အဲ့လိုမျိုး​တွေလည်း ကြုံရတယ်​လို့…
တချို့ ပိုက်ဆံရှိတွေဆို မသိရပါဘူးးး
Keep Low Profile ပဲ။
တချို့ က စပွန်စာပေးချင်မှ ထွက်လာတာတို့ဘာတို့။
နာလည်း သိမ်းထားတဲ့ ဖလာရီလေးတွေ ထုတ် အူးမှ။
ဟုတ်​ပါ့.. လုံးဝအရှက်​မရှိ​နော်​.. အံ့သြလွန်းလို့.. ငါ ဘာ​ကောင်​ကွ.. ဘာ​ကောင့်​သားက ဆိုပြီး ဖိုက်​တာလုပ်​ချင်​ပုံရယ်​.. သတ္တိမရှိတာသာ ခက်​တာ..
အမူအကျင့်ဟာ ချမ်းသာမှုနဲ့ လားလားမှ မဆိုင်
​အေးဟ.. နည်းမှန်​လမ်းမှန်​ ချမ်းသာခဲ့တဲ့လူ​တွေ မဟုတ်​လို့​ပေါ့ဟာ..
တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင်ပါလား..မနေ့ညနေက သမီးသိပ်နေမကောင်းလို့ သူ့အမေနဲ့ဆေးခန်းသွားတယ်
အပြန်မှာအဲ့ရန်ပွဲကိုတွေ့ခဲ့လို့ပြန်ပြောပြနေသေးတယ် မွန်မွန်ရဲ့…အင်း..တစ်နေ့တစ်နေ့ကားမောင်းရတာလည်း တထိတ်ထိတ်နဲ့ပါကွယ်..
ဟုတ်​တယ်​ ဦးမိုက်​ရယ်​.. လူသွားဖို့ သီးသန့်​မရှိတဲ့မြို့.. ယာဉ်​​ကြော​တွေနဲ့ ပိတ်​ကျပ်​​နေတဲ့မြို့မှာ ကား​ပေါ်ကလူ.. လမ်း​ပေါ်ကလူ အားလုံးက ​ဒေါသ​တွေ ကိ်ုယ်​စီနဲ့​ပေါ့.. ချုပ်​ထိန်းနိုင်​တဲ့ အသိမရှိရင်​ ဆုံးရှုံးကြရ​တော့တာပဲ..
တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင် မနက်ကတင် ဖယ်ရီပ်ါမှာ Anthony Hopkins ရဲ့ The Edge ကို သွားသတိရမိသေးတယ်….။
ပိုက်ဆံရှိတိုင်း၊ ပညာတတ်တိုင်း…လူကြီးလူကောင်းဖြစ်တာတော့ မဟုတ်
ဒါကြောင့်လဲ..စွမ်းအားရှင်တွေလက်ထဲ အာဏာထည့်လိုက်တော့ ဗြောင်းဆန်ကုန်တာပ…
ဘာတွေ ပြောမိနေလဲ မသိဘူး…
ပြီးခဲ့တဲ့ရက်က မင်္ဂလာဈေးနားမှာ တက္ကစီသမားကို ပစ်ကပ်တစ်စီးက လီဗာသံ ဗျူးဗျူးဗြဲဗြဲနဲ့ အတင်းဝင်တိုးတော့ တက္ကစီသမားက ခြေထောက်နားမှာ ချထားတဲ့ ဓားမြှောင်ကို ထုတ်ပြီး တံခါးဘောင်မှာ စိုက်ထားလိုက်တယ်။
ကိုယ်ကတော့ ဘယ်အချိန်ကားပေါ်ကဆင်းပြေးရမလဲလို့ အဆင်သင့်ပြင်ထားရတယ်။ :eee:
ကြုံရဆုံရ….. မွန့်ဘဝ ဆိုပြီး.. Tag တစ်ခုဖွင့်…